सबै जिमहरू मा वैध ठाउँ लिन्छ एक अण्डाकार प्रशिक्षक। लाभ यो पक्कै कुनै एक छ। यसलाई अतिरिक्त सेन्टिमिटर र किलोग्राम को सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त गर्न मात्र होइन मद्दत गर्छ, तर पनि हृदय बढावा, रक्त नली बलियो बनाउँछ। को ellipsoid काम मा पाठ व्यावहारिक सबै मानव मांसपेशीमा, र यो अतिरिक्त सिमुलेटर समाप्त समयमा। साथै, यस्तो प्रशिक्षण धीरज विकास। पनि कुनै पनि शारीरिक प्रशिक्षण को अभाव मा, कुनै पनि उमेर मा आफ्नो palpable प्रयोग - वस्तुतः एक अण्डाकार प्रशिक्षक प्रयोग गर्न कुनै contraindications। उहाँले जोइन्टहरूमा हानि गर्दैन, त्यसैले पनि मानिसहरूलाई सबैभन्दा बलियो musculoskeletal सिस्टम तालिम सक्दैन।
धेरै मानिसहरू किनभने समय को कमी को जिमहरू भ्रमण र घर प्रयोगको लागि एक अण्डाकार प्रशिक्षक खरिद गर्न रुचि गर्न इन्कार गर्छन्। सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल कसरी चयन गर्ने? तपाईं को प्रकार सहित धेरै चर, मा सुरु गर्न आवश्यक सिम्युलेटर, प्रकार शक्ति, उचाई, वजन, व्यायाम, मूल्य र compactness।
एक अण्डाकार चयन गर्ने बारे एउटा प्रश्न जवाफ घर लागि प्रशिक्षक, बजार उपलब्ध विविधता सुरु गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। पहिले, ellipsoids को प्रकार मा अर्ध-व्यावसायिक, व्यावसायिक र घर प्रतिष्ठित। उत्तरार्द्ध, नाम सुझाव रूपमा, अपार्टमेन्ट र निजी घरमा को लागि सिद्ध, कारण अपेक्षाकृत कम वजन र compactness छन्। खरिद जिमहरू पेशेवर मोडेल को विरोध गर्न तिनीहरूले, घडी को आसपास काम गर्न डिजाइन छैन। आवास पनि सम्भव एक अर्ध-ellipsoid खरिद गर्न छ। यो एक स्वीकार्य वजन र एकदम गहन काम जोडती।
साथै, सबै अण्डाकार व्यायाम मिसिन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ चुम्बकीय, चुम्बकीय, समायोज्य इलेक्ट्रोनिक, विद्युत चुम्बकीय वा प्रेरणा।
चुम्बकीय सिमुलेटर सबैभन्दा सरल र सस्तो। तिनीहरूले एक प्रदर्शन छ जहाँ प्रदर्शित गति, यात्रा किलोमिटर, क्यालोरी, हृदय दर। तिनीहरूले छ विशेष कार्यक्रम, लोड प्रदर्शन टगल घुमाउँदा द्वारा समायोजित छ। कम लागत बाहेक अर्को फाइदा छ - यो कहीं स्थापित गर्न सकिन्छ अर्थात् त्यहाँ, को आउटलेट कुनै सन्दर्भ छ।
चुम्बकीय ellipsoids विद्युतीय समायोजन तपाईं आफ्नो विवेकमा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सेट गर्न अनुमति दिन्छ। तर, आफ्नो काम नजिकैको बिजुली आवश्यक छ।
पुनःस्थापना केन्द्र, व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई मुख्य रूप चयन प्रेरणा (विद्युत) अण्डाकार - यस्तो मोडेल को उपयोग एक सही लोड मापदण्डहरू स्थापना गर्न छ। त्यहाँ नेटवर्कमा काम मोडेल हो, तर पनि विकल्प उत्पन्न छन् त्यहाँ।
विशिष्ट मापदण्डहरू सन्दर्भमा, अग्लो मान्छे राम्रो सिमुलेटर पछिल्लो चक्का संग, अगाडि-पाङ्ग्रा ड्राइव मा एक मामूली वृद्धि थप सुविधाजनक हुँदा रुचि गर्न। तपाईं एक अण्डाकार प्रशिक्षक द्वारा विशेषता छ जो कम सेटिङहरू, चयन गर्नुभयो भने, छैन कम 190 भन्दा सेमी लाभ को घुँडा मा दुःख र पीडा परिणत हुन सक्छ - साथै, जब उच्च वृद्धि 51 सेन्टीमिटरको फलाँगको लम्बाइ र आधार एक लम्बाइ चयन गर्नुपर्छ।। मा कम मानिसहरू यस्तो कुनै समस्या छैन - तिनीहरूले चलचित्र र इन्टरनेट पहुँच मार्फत ब्राउजिङ को संभावना सहित, कुनै पनि विशेषताहरु संग एक सिम्युलेटर चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
एक वयस्क लागि आघात अवशोषक एक स्कूटर कसरी चयन गर्ने?
नृत्य हल नृत्य र प्रशिक्षण लागि दर्जा पोशाक
शुरुआती लागि स्की जूता कसरी चयन गर्न
Windows7मा रूपमा Hibernate असक्षम? Windows मा निद्रामा मोड असक्षम कसरी चरण पुस्तिका द्वारा चरण 7
Cockroaches, कीरा: प्रजनन, को कारण, र तिनीहरूलाई लड्न तरिकाहरू
मुख्य प्रकारको निर्माण
छत सामाग्री: प्रकार र गुण। छत सामाग्री FUSING
Stalker को रहस्य। "Pripyat को कल" - को बित्दै जाँदा खेल
"Paddington": चलचित्र समीक्षा